फेरी गयो भूकम्प।ठूलो धक्का महसुस |
फेरी गयो भूकम्प।ठूलो धक्का महसुस
September 25, 2021 adminLeaveaComment on फेरी गयो भूकम्प।ठूलो धक्का महसुस
सुदूरपश्चिम केन्द्रविन्दू भएर गयाे ठूलाे भूकम्पकाे धक्का ! बैतडीसहित सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा आज भूकम्प गएको छ । राति ८ बजेर ४० मिनेटमा गएको भूकम्पले बैतडी, दार्चुला र बझाङलगायत जिल्लामा धक्का महसुस गरिएको हो ।
याे पनि, भोक नलाग्ने समस्या हटाउन नियमित रायाेकाे साग सेवन गर्नुहोस्, यस्ता छन् अन्य फाइदा ! रायोको सागमा पाइन्ने भिटामिन ए, सी र के युक्त तत्वले हाम्रो शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्छन् ।
रायोको सागमा पाइने फोलिक र म्याग्नेसियमले शरीरमा रहने विभिन्न वि-कारयुक्त वस्तुलाई बाहिर निकाल्छ । रायोको दाना पिसेर तरकारीमा हालेर खाँदा पाचन प्रक्रिया बलियो बन्छ । यसले भोक नलाग्ने समस्यासमेत हटाउँछ । शरीरमा भिटामिन केको कमी भएमा गर्भवतीलाई वाकवाकी बढी नै लाग्ने, टाउको दुख्नेजस्ता समस्या हुन्छ ।
रायोको सागमा भिटामिन के प्रचुर मात्रामा पाइने भएकाले गर्भवतीलाई खुवाउँदा समस्या हल हुन्छ । जाडोमा बाथका रोगीलाई हड्डी दुख्ने समस्या हुन्छ, खासमा बढी बुढाबुढीलाई । रायोमा पाइने कपरले यो समस्या हल गर्छ । रायो भिटामिन सीको पनि राम्रो स्रोत हो । तसर्थ, रुघाखोकी लागिरहने मानिसले रायोको साग खानुपर्छ ।
ललितपुरको यो ठाउमा छा,’नीछानी युवती एकपटककाे तीनदेखि १५ हजार
भर्खर काठमाडौंदेखि आयो डरलाग्दो खबर।सुन्दा जसको पनि सातो जान सक्छ।मुटु दरो बनाएर हेर्नुहोला